Mogadishu Journal » Madaxweynaha Jubbaland oo ka horyimid qodobo uu hor-dhigay James Swan
Madaxweynaha Jubbaland oo ka horyimid qodobo uu hor-dhigay James Swan
Mjournal -Magaalada Kismaayo waxaa kulan ku yeeshay maanta oo halkaa gaaray wafdi ka socday beesha caalamka oo uu horkacayay wakiilka Qarramada Midoobey ee Soomaaliya James Swan.
Kulanka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Labada madaxweyne ku-xigeen Wasiirro ka tirsan maamulka Jubbaland oo ay ka mid ahaayeen Wasiirka arrimha gudha iyo kan Amniga, halka dhinaca beesha caalamka James Swan socdaalkiisa ay ku wehlinayeen Wakiilka Midowga Afrika, Ergey ka socda IGAD iyo Taliska AMISOM.
Kulanka ayaa looga wada hadlay hannaanka doorashada maamulka Jubbaland iyo xiisada siyaasadeed ee ka taagan Kismaayo, waxaana ilo xog ogaal ah oo ay Hiiraan Online la hadashay u sheegeen in wafdiga beesha caalamka ka dalbadeen madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe in musharixiinta Isbadal-Doonta loo ogolaado in ay is diiwaan-galiyaan si ay uga qeybgalaan doorashada, waxna laga qabto cabashada ay qabaan.
Laakiin waxaa ay wararku sheegayaan in madaxweynaha Jubbaland wafdiga uu u sheegay in arimahaa oo dhan ay tahay in lagala hadlo guddiga doorashooyinka iyo xudduudaha oo dhawaan ku dhawaaqay Liiska xildhibaannada cusub ee Jubbaland oo dhawaan la dhaariyay.
Guddiga doorashooyinka ayaa la sheegay in ay ku xireen musharixiinta u tartameysa xilka madaxweynaha maamulka Jubbaland sharuudo caqabad ku noqday inta badan musharixiinta Isbadal-Doonta taasoo keentay in ay qaadan waayaan shahaadooyinka aqoonsiga musharaxnimo.
Lama oga sida guddiga doorashooyinka iyo xuddudaha Jubbaland ay ka yeeli doonaan codsiga ka yimid beesha caalamka ee la xiriira in dib loo furo diiwaan-galinta musharixiinta xili lagu balansanaa in la doorto guddoonka Baarlamaanka cusub ee soo dooranaya madaxweynaha.
Socdaalka wafdiga beesha caalamka ayaa u muuqda mid qeyb ka ah dadaalladi ugu danbeeyay ee la doonayo in lagu qaboojiyo xiisada siyaasadeed ee Kismaayo iyo is mari-waaga ka taagan hannaanka ay loo wado doorashada.
Ra’iisul Wasaaraha oo Isbitaalka ku booqday Askartii ku dhaawacantay weerarkii Awdheegle